बहसका लागि डा केसी अदालतमा उपस्थित
काठमाण्डौ २६ पुस अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका डा. गोविन्द केसी सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । आज हुने बहसका लागि डा केसी अदालत उपस्थित हुनुभएको हो । डाक्टर गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत सुनुवाइ पनि आजै हुँदैछ ।
अदालतको मानहानिको विषयमा केसीको पक्ष र विपक्षमा कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्न बाँकी रहेकाले सुनुवाइ हुन लागेको हो । केसीको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र ओमप्रकाश अर्याल तथा विपक्षमा रमन श्रेष्ठले बहस गर्दै हुनुहुन्छ ।
न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा मंगलबार बयान गराइएको थियो । मंगलबारको बयानमा डा. केसीले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको तर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएका कारणले उनीबाटै अवहेलना भएको बताउनुभएको थियो ।
केसीले प्रधानन्यायाधीशले दुई ठाउँबाट नागरिकता लिएको, उमेर सच्याएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको, मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाहरुमा विवादास्पद फैसला गरेको लगायतका आरोप लगाउनुभएको छ ।